Alahady 22 Septambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 22 Septambra 2019
Alahadin'ny Sampanasa FFP - Fahalalana Soratra Masina
« Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny, mba hamoa bebe kokoa. » (Jaona 15:1-2)
Niantomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fotoana. Maminirina Razafimaharo diakona ary mpampianatra Katekomena no nitarika raha ny Mpitandrina Evanjelisitra Lalaoniriana Pierrette izay mitondra ny fiangonana ao Tsaramandroso Synoda Ziona Vaovoa no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. (Azonao henoina ato izany toriteny izany) Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahana. Izao alahady izao no nitondra am-bavaka ny Katekomena “Afaka”
Ny teny tao Apokalypsy 15 : 3b-4 no niarahan’ny fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana Apostolika. Ny hira fanevan’ny faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.
Vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra noho ny andro izao nomeny anio, hahafahana indray miara-mivavaka. Vavaka fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny halebehin’ny asany sy ny fitiavany. Vavaka fisaorana an’Andriamanitra noho ny fahatontosan’izao fanompoam-pivavahana izao ihany koa ary vavaka fangatahana ny Fanahy Masina mba tena hitoetra anatin’ny tsirairay.
Zoky Léa Rabiazamaholy, mpampianatra ao amin’ny K6 no nitarika izany. Ny teny ao amin’ny Salamo 119 : 105 no nentiny nakana ny hafatra.
Tantara iray no nentiny nanaovana fanoharana : Nisy Mpitandrina iray izay miasa any ambanivohitra izay sady tsy manana fiarakodia na moto fa mandeha bisikileta. Raha iny izy nandeha haria, ny lalana ratsy ka niahiahy izy. Ny jiro ihany koa anefa tsy dia mazava koa rehefa nandeha izy dia sendra nifanena tamin’ny andihan-dehilahy. Kanefa efa niomana izy satria ilay tenin’Andriamanitra « Fanilon’ny tongotro sy fahazavan’ny lalako Ianao » no tao an-tsainy.
Koa rehafa novaliana hoe « ahoana ry zalah ? » dia tonga saina ireto olon-dratsy fa hay i Pastera ilay olona saika norobaina avy hatrany dia nitsoaka ireto farany.
Ny hafatra anatin’izany dia hoe : miaraka amin’ Andriamanitratra dia afaka foana ianao na aiza na aiza satria izy no Fanilon’ny tongotrao sy fahazavanao.
Nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary natao ny hira FF6 rehefa vita izany ary nisy ny vavaka tao aorian’izany.
Mialoha ny famakiana ny tenin’ny Soratra Masina dia noredonin’ny Fiangonana ny Hira FFPM 276 and. 3
Taorian’izany dia natolotry ny ankizy avy amin’ny Katekomena andiany AFAKA ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany dia ny 1 Tan 28 : 9 :10 / Jao 15 : 1-8 / Rom 12 : 1-2.
Nisy ny vavaka fangatahana ny Fanahy Masina noho ny tenin’Andriamanitra ary nifandimby namaky izany ireo ankizy tao amin’ny Katekomena.
Rehefa voavaky avokoa izany tenin’Andriamanitra izany dia niara-nanandram-peo tamin’ny fihirana ny Hira FFPM 447: 1-2, ny Fiangonana.
Araka ny voalaza tetsy ambony dia ny Mpitandrina Evanjelistra Lalaoniriana Pierrette no nitory ny tenin’Andriamanitra. Nanao vavaka izy aloha ary avy eo dia niarahaba ny Fiangonana
Ny teny nangalàna ny hafatra dia hita ao amin’ny Jaona 15 : 1-8 ary novakiana manontolo izany.
Ny peripoka misy hafatra dia ahitana tsara ny fanoharana nataon’ny Jesoa Kristy no tena voaloboka mitondra ny sampana.
Hita fa miverimberina ny teny hoe « voa » ao anatin’io perikopa io.
Azo sintomina amin’izany fa misy tanjona omen’ny Tompo dia mba hamoa be ihany koa isika.
Kanefa, raha te hamoa be ao amin’ny Tompo isika dia :
1 – MANAIKY AMBOARINA:
I Jodasy no ohatra voalohany, izy dia tsy nanaiky amboarina ary voasoratra fa izay tsy manaiky izany dia may sy ho very. Ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa (diovin’ny Tompo).
Fanamboarana ho amin’ny tsara, ho amin’ny fitombohana, ho amin’ny fanatsaràna. Izany fanamboaran’ny Tompo izany dia mitondra antsika ho amin’ny fahamasinana; Ahoana no hanaovana izany : amin’ny alalan’ny finoana, amin’ny alalan’ny firaisana amin’ny Tompo. Izany rehetra izany dia ataontsika amin’ny alalan’ny vavaka.
Ny Fanahy Masina dia miasa amin’ny alalan’ny vavaka.Nampianatra ny fiainana ho an’ny mpianany i Jesoa Kristy fony izy niara nitoetra tamin’izy ireo, ary niainan’ireto mpianatra izany tamin’ny alalan’ny vavaka.
Ny vavaka dia anatin’ny asa fanompoana ihany koa. Ny 90% dia efa asan’Andriamanitra satria anatin’ny vavaka ihany koa dia ny 10% sisa no antsika.
2 – MANAMBOATRA ANTSIKA AMIN’NY ALALAN’NY TENINY ANDRIAMANITRA
Ny tenin’Andriamanitra dia manadio. Amin’ny maha tsy mbola tanteraka antsika dia manamboatra antsika izy. Ny tenin’Andriamanitra no manavao antsika isan’andro ary tokony hiainantsika izany. Rehefa ao amin’ny Tompo ny olona iray dia mahatsapa fa manana hery fahefana amin’ny fiainany io tenin’Andriamanitra io.
Ny fanompoana ny Tompo dia tokony atao amin’ny fahamasinana, izany hoe feno hery sy feno fiainana satria isika dia mbola malemy.
Mila manovo hery amin’Andriamanitra isika satria tsy hahefa na inona na inona isika raha tsy miaraka aminy.
Ny olona manaiky amboarina amin’ny vavaka sy ny tenin’Andriamanitra ihany no afaka mamoa be araka ny tenin’ny Tompo.
3 – MISY VOA ISIKA REHEFA MIARAKA AMIN’NY TOMPO
Hangatao izay tianareo na inona na inona hoy ny Tompo fa ho tonga aminareo izany.
Tsy dia zavatra amin’ity fiainana ity loatra no tiany ambara. Ny mba hirosoan’ny asan’Andriamanitra, hikelezantsika Fjkm, hamonjena fanahin’olona mbola very. Ny hafatry ny Tompo dia ny hahavitana ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra. Ny voa voalohany dia ny fitiavana raha miaina ny tenin’Andriamanitra. Fitiavana ny hafa miitory ny Filazantsara. Ny voa faharoa dia ireo olona niova fo, mibebaka babon’I Kristy. Mahafaly ny mahita vokatra, olona andevozin’ny tromba dia afaka. Raha mifona isika, mibebaka dia mamela ny Tompo satria mahafaly Azy izany.
Fa na inona na inona voa vokarintsika dia tsy antsika izany fa an’I Kristy.
Na amin’ny mora, na amin’ny sarotra dia tokony ao amin’ny Tompo foana isika.
Samia mahery daholo isika ka mamoa be isika amin’ny andraikitra nomen’ny Tompo antsika, indrindra fa ny fitoriana ny Filazantsara.
VAVAKA SETRIN'NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA
Nanolotra vavaka fisaorana an’Andriamanitra noho ny teny sy hafatra izay azo ny mpitarika ho setrin’ny toriteny.
Notohizany avy hatrany ho vavaka famelan-keloka izany.
Ary rehefa tanteraka izany dia niaraka nanao ny fanekem-pinoana laharana fahatelo teo am-pitsanganana ny fiangonana.
Nanatanteraka ny anjara hirany ny R F F avy eo.
TATITRY NY KATEKOMENA ANDIANY "AFAKA"
Tamin’ny 28 Nov 2018 no nanomboka ny fampianarana ; Nandray anjara tamin’ny asa fanisàna vato tamin’ny fifidianana nisy teto am-piangonana tamin’ny volana aprily ; Nandray anjara ihany koa tamin ny fifafinana fanatanjahan-tena tamin’ny volana mey 2019 ;
Nisaotra an’Andriamanitra nandritra izay fotoana fianarana izay, nisaotra ny mpitandrina mivady ary ny fiangonana iray manontolo izay nitondra ambavaka.
Nanao ny hira FF2 ny Katekomena rehefa vita ny hafatra.
Ratoa Andry Rakotomanana no nanatanteraka izany.
– Hanomboka rahampitso ny herindron’ny sampana mitaiza tanora.
– Asabotsy : maraim-baovao – tolakandro fivorian’ny Taniketsa
– Notononina toy ny mahazatra ny toetry ny vola nandritry ny herinandro
– Sampana Sekoly Alahady : nisy ny fanentanana ho an’ireo izay maniry hampianatra ny Alahady 29 septambra ary io daty io ihany koa ny no famaranana ny fisoratana anarana amin’ny dia izay hatao any Vatomandry
– Nisy ihany koa ny tatitra mikasika ny fanatanjahan-tena izay tanterahan’ny mpivavaka eto anivon’ny fiangonana
– Antsoina ny tanora izay maniry hanao fanatanjahantena mba hisoratra anarana eny amin’ny sampana RFF ny alahady 29 septambra ho avy izao
– Nisy taratasy fisaorana ihany koa izay nentin’i Lanto noho ny fahatanterahan’ny ny fanakalazana an’Andriamanitra nohon’ny faha-15taona niasany teto.
Niarahaba ny fiangonana ny Mpitandrina Raharijaona. Ary nanamafy ny fitondrana am-bavaka ireto raharaha manaraka ireto :
– Ny asan’ny FFP
– Ny asa ao amin’ny radio Fahazavàna (anio alahady ny Radio Fahazavàna no manatanteraka ny fandraisampeo hamohany an’izany amin’ny radio)
– Nisaotra ny Katekomena sy ny mpampianatra
– Nisaotra ny mpitandrina evanjelistra ihany koa izy
Atoa Andriamasinoro Tantely no nitarika izany. Ny teny tao amin’ny Sal 84 : 4 no nentiny niarahaba ny fiangonana.
Ireto manaraka ireto ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 20 / FFPM 539 : 1 / FF 14 : 3 / FFPM 451 : 1 / FF28
Tovovavy roa nahavita taom-pianarana ka afaka fanadinana ; afaka BEPC sy ny fanohizana fianarana ; renim-pianakaviana hiverina any am-pitandranomasina ; nahazo asa sy trano vaovao ; renim-pianakaviana mahatsiaro ny fahasoavana voarainy
Ny hira 276: 3 no natao ho fanolorana ny rakitra no sady fanavaozana ihany koa ny fanoloran-tena.
Natao ny hira FFPM 761 – 1 netina nanombohana izany. Ny zaza ANDRIANARY Kanto Mahaliana no natolotra anio.
Nisy ny tenin’Andriamanitra izay natolotry ny mpitandrina ary notohizany tamin’ny vavaka izany ho fangatahana an’Andriamanitra mba hitombo eo ambanin’ny fahasoavan’ny Tompo ny zaza ary tsy ho ela ihany koa dia hiroso amin’ny batisa.
Rehefa vita izany dia niarahaba ny ray aman-dreny ny mpitandrina ary nampirisika azy ireo mba hitaiza tsara hampitombo fitia ao amin’Andriamanitra ny zaza
Ny zaza RABENTAOANDRO Iloniaina nonaroso tamin’ny sakramentan’ny batisa. Rehefa izay dia nisy feon-javamaneno fohy ary natao ny vavaka fangataham-pitahiana.
Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nanatontosa izany. Nisaotra noho ny toriteny izy ary naneho fankasitrahana an’Andriamanitratra ho an’ireo izay efa mamoà tsara ary mba hanalavitra ireo tsy mamoà ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; ho an’ny Mpitandrina avy nitory Teny sy ny ankohonany ary ny asany ; ho an’ny ireo Katekomena izay avy nanao fisintonana sy nanatrika ny fotoana androany ; ho an’ny sampan’asa FFP ; ho an’ny izay ho filohan’ny synodaly sy birao rehetra ary rafitra ao anatiny ny amin’ny asa fanompoana izay miandry azy ireo ; ho an’ny sahirana sy tsy salama ary mana-manjo ; ny tratran’ny tsi-fidiny sy voan’ny tsindry hazolena ; ny manana hataka manokana rehetra ; ny nanao raki-pisaorana sy nangata-bavaka izay nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…”
FAHALALANA SORATRA MASINA
Notaterahina avy eo ny fahalalana Soratra Masina arak any efa nampiomanana ny mpianakavin’ny finoana. Izany dia notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy.
Natao ny hira FFPM 432 : 1-3 dia notononina ny tondrozotra 2019.
Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny FFPM 336:1 nofaranana tamin’ny Amena. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno.
Nitohy tamin’ny Ankatoky ny fandraisana ny fotoana.
Mpitendry Orga : Rajaofetra John sy Rajaofetra Philippe .
Fafana : Rajaofetra Arielle
Soratra : Ranaivoson Joël